हात्ती महोत्सवले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो – Saurahaonline.com
हात्ती महोत्सवले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो
सौराहा अनलाइन | २०७३, ११ पुष सोमबार
तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको सौराहामा अघिल्ला बर्षहरुमा झैं यो बर्षपनि हात्ती महोत्सव सुरु भएको छ। पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि हात्ती महोत्सवको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । नेपालमा हात्तीका खेलहरु खेलाइने महोत्सव पहिलो पटक सौराहामानै आयोजना हुँदै आएको छ । पुष ११ देखि १५ गतेसम्म आयोजना हुने १३ औं हात्ती महोत्सवको अब उद्धघाटन मात्रै हुन बाँकी छ । चितवनको पर्यटनमा यसले कस्तो टेवा पुग्ला ? यिनै बिषयमा केन्द्रीत रही आयोजक संस्था क्षेत्रीय होटल संघ, चितवनका अध्यक्ष सुमन घिमिरेसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंश
1. १३ औं हात्ती महोत्सवको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
बिशेषगरी सौराहा हात्ती सफारीको नामले प्रख्यात भएको कारण पनि हामीले हात्ती महोत्सवलाई नै प्राथमिकता दिई हात्तीकै गतिविधि, खेललाई नै रोचक ढंगले पस्कने प्रयास गरेका छौं। जसको लागि हामीले बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको चौरमा हात्ती महोत्सवलाई चाहिने पूर्वाधार निर्माण गरेका छौं। हात्तीकै गतिविधी हुने भएकाले हात्ती तथा माउतेहरुलाई प्रशिक्षण दिईरहेका छौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य हात्तीमैत्री खेललाई अगाडी बढाउँदै मानिस र जनावरबीचको घनिष्ठता बढाउनु हो। त्यसका लागि सोही अनुरुप प्रशिक्षण दिएका छौं । दैनिक केही समय दर्शकहरुको मनोरञ्जनको लागि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेका छौं । जसको लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुको समेत समय तालिका निश्चित भईसकेको छ। महोत्सवमा बढी भन्दा बढी दर्शक तथा उपस्थितिको लागि प्रचार प्रसारको कार्यलाई तीब्रता दिएका छौं। समग्रमा हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौं।
2. हात्ती महोत्सवको मुख्य उद्देश्य के हो ?
खास हाम्रो उद्देश्य वा लक्ष्य भनेकै सौराहाको पर्यटनलाई प्रर्वद्धन गर्नु हो। प्रर्वद्धनको तरिका बेग्ला बेग्लै हुन्छन्। तर सौराहाको विशेषता हात्ती सफारी हो। यो निकुञ्जको काखमा रहेको हुँदा प्रतिकात्मक रुपमा हामीले वन्यजन्तु मैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ, वन्यजन्तु हाम्रो साझा सम्पत्ति हो, यीनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यिनै वन र वन्यजन्तुको संरक्षण र जगेर्ना गर्नको लागि जनजेतना अभिवृद्धि गर्नु नै हो। गत बर्षको भूकम्प र नाकाबन्दीको असर अहिलेसम्म पनि सौराहाको पर्यटनमा परेको छ। नेपालका अरु जिल्लामा यसको प्रत्यक्ष असर परेतापनि चितवन पर्यटनको लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य हो, जसले गर्दा लक्ष्य अनुसार पर्यटकको आगमनमा बृद्धि हुनेछ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ ।
4.अघिल्ला बर्षहरुमा गरिएको हात्ती महोत्सव र अहिलेको हात्ती महोत्सवमा के फरक छ ?
बिगत १३ बर्षबाट हात्तीका गतिविधि समेटेर हात्तीका खेलहरुलाई प्राथमिकतमा राखी महोत्सव गराइराखेका छौं। अघिल्ला बर्षहरुमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ब्राण्ड बनिसकेको हात्ती महोत्सवलाई हामीले निरन्तरता दिनको लागिनै हात्तीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिराखेका छौं। हामीले अघिल्ला बर्षहरुका कार्यक्रममा हात्ती दौड र हात्ती फास्ट वाक रुपमा परिमार्जित गरी अहिले थप हात्तीका खेलहरुलाई समावेश गरी हात्ती महोत्सव शुरु गरेका छौं। हात्ती दौडमा मात्र सीमित भएको महोत्सवलाई थप प्रभावकारी बनाउन हात्ती वनभोज कार्यक्रम, हात्ती फास्ट वाक प्रतियोगिता, हात्तीको श्रृंगार प्रतियोगिता, हात्ती पोलो, हात्ती पेण्टिङ, डुंगा प्रतियोगितालाई समेत समावेश गरेका छौं । जसका कारण अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा अहिलेको महोत्सव फरक छ ।
5. हात्ती महोत्सवका आर्कषणहरु के के छन्?
हात्तीहरुको खेलका गतिविधिहरलाई समेटी खेलाइने भएकाले यो आफैंमा आर्कषणको केन्द्र बिन्दु हो। एकै ठाउँमा धेरै भन्दा धेरै हात्ती एउटै मैदानमा देखिनु पनि पर्यटकका लागि आर्कषणको केन्द्र बिन्दु बन्न सक्छ। वन र वन्यजन्तुलाई संरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने सन्देशपनि दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको हंँुदा मानवले हात्तीसँग गरिने व्यहारमा सुधार आउने, हात्तीको अधिकार, सुरक्षा अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी हात्तीलाई कुनैपनि अनावश्यक दःुख नदिई खेलमा समाबेश गरिने हँुदा खेल हात्तीमैत्री हुन्छ। त्यस्तै हात्तीका बिभिन्न खेलहरु सँगसँगै हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि थप मनोरञ्जन दिनको लागि डुंगा दौड प्रतियोगिता, राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुलाई समेत समावेश गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई समेत समेटेका छौं। सौराहाको केन्द्र ठाउंँमा हुने महोत्सव भएको हँुदा थप प्रभावकार िहुने विश्वास लिएका छौं।
6. महोत्सवमा हात्तीलाई शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पुग्ने भन्दै पशुअधिकारकर्मीहरुबाट बिरोध हुने गरेको छ ? यसमा तपाईको भनाई के छ?
हात्तीका बिभिन्न गतिविधीहरुलाई समावेश गरेर खेलाइने खेल भएकोले, हात्तीलाई जवरजस्ती खेलमा सामेल गरियो भनेर यदा कदा बिरोध त नभएका होइनन, तर अहिले आएर धेरैको सोचमा परिवर्तन आाइसकेको छ। उनीहरुको चेतनास्तरमा समेत परिवर्तन भएको छ । हामी पर्यटनकर्मी पनि लोपोन्मुख जनावर हात्तीको बारेमा उत्तिकै सजक छौं, यो हाम्रो अमूल्य साझा सम्पत्ति हो । सौराहाको विशेषता हात्ती भएको हुंँदापनि हामीले हात्तीमैत्री बनाउन, हात्ती र मानवबीचको सुमुधुर सम्बन्ध स्थापित होस् भन्ने चाहना हो। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरिदन समेत आग्रह गर्दछु।
7.महोत्सवले सौराहाको पर्यटन विकासका कत्तिको टेवा पु¥याउला ?
हात्ती महोत्सव राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भएकोले यसले पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पु¥याउँछ। विगतका अनुभवले समेत हामीलाई निकै ठुलो सहयोग पु¥याएको थियो। क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा बाह्य पर्यटकहरु घर फर्किने गर्दछन् । हामीले त्यस्ता बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी उनीहरुको बसाई लम्व्याउन र थप आर्कषण दिन हात्ती महोत्सवको आयोजना गरेका हौं। अहिले हात्ती महोत्सव हेर्नका लागि आन्तरीक बाह्य पर्यटकहरु ले धमाधम होटल बुक गर्ने क्रम जारी छ । जसले गर्दा सौराहाको पर्यटनमा थप आशा र उत्साह मिलेको छ ।